Xiaomi na-ekpughe onyinyo mbụ nke Xiaomi Mi Band 3 | Gam akporosis
Xiaomi na-egosi onyonyo izizi nke Xiaomi Mi Band 3
Edere Ferreno | | smartwatch, Xiaomi
Xiaomi abụrụla otu n'ime ụdị ihe ịga nke ọma na ahịa wearable. Akụkụ dị ukwuu nke ihe ịga nke ọma ya na-abịa maka Mi Band, nke nke atọ na-atụ anya n'oge na-adịghị anya. Onye isi oche nke ndị ahịa China n'onwe ya buru ya n'oge ngosi nke Black Shark, nke mere ka asịrị ahụ bawanye. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya malitere ịkpọsa Xiaomi Mi Band 3.
Kemgbe ha bipụtara onyonyo izizi na netwọkụ mmekọrịta. N'ime ya anyị nwere ike ịhụ akụkụ dị ukwuu nke atụmatụ nke Xiaomi Mi Band 3 a. Ya mere, anyị nwere ike ịnweworị echiche doro anya gbasara ya. Ya mere nhapụ ya na-abịa n'oge adịghị anya.
Nhazi nke mgbaaka ọhụrụ nke ika China ga-agbaso ụzọ nke onye bu ya ụzọ setịpụrụ. Ya mere, anyị ahụghị bọtịnụ ọ bụla. Naanị anyị ga-ahụ ihuenyo mmetụ nke iji ya. Na onyonyo dị n’okpuru, anyị nwere atụmatụ nke Xiaomi Mi Band 3.
Nkọwa banyere mgbaaka a amachabeghị. A maara na ntakịrị ihe karịrị otu ọnwa gara aga ọ nwetara asambodo Bluetooth, akpan akpan, ọ na e gbaara na Bluetooth 4.2. Ya mere, anyị maara ụdị nke anyị ga-eji. Ma enwebeghị nkọwa ọ bụla ọzọ ekpughere ka ọ dị.
Ọ bụ ezie na enwere ike Ugbu a anyị nwere ihe osise izizi nke Xiaomi Mi Band 3 a, nkọwa ndị ọzọ gbasara ya ga-amalite ịbịaru nso.. Ha kwesịkwara ikpughe n'oge na-adịghị anya ụbọchị mgbe a ga-eweta ya ma ọ bụ mgbe ọ ga-akụ ụlọ ahịa.
Site na mgbaaka a, akara ndị China na-achọ ịkwado ihe ịga nke ọma ya n'ahịa ndị na-eyi uwe, ebe ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma. Dị ka data nke abụọ mgbe Apple gasịrị. Ya mere, ọ ga-adị mkpa ịhụ ma Xiaomi Mi Band 3 ọhụrụ a na-achịkwa iji bulie ahịa ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Xiaomi na-egosi onyonyo izizi nke Xiaomi Mi Band 3
Have zoro ezoro ziri ezi? Foto a bụ nke Mi Band 2
Foto mkpuchi ahụ bụ nke Mi Band 2, n'ime isiokwu ahụ bụ nke Xiaomi bipụtara banyere Mi Band 3. Mana m na-agbanwe foto mkpuchi, iji zere ọgba aghara! Daalụ maka okwu gị 🙂
M na-ezo aka na nke Twitter. Xiaomi n’onwe ya ekwuola na ọ sitere na Mi Band 2 ma ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ.
Instagram ga - enye ndị ọrụ ohere ka ha mechie ọnụ